March 2020 - Shop
Shop > All Articles > 2020 > March
သင်ဟာ ဘယ်လိုအသားအရည်မျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာလဲ …0462
The KaungHtet March 31, 2020 9:57 am March 31, 2020
ဒီနေ့မှာတော့ အိမ်တွင်းအောင်းနေတဲ့သူလေးတွေအတွက် အလှအပဆိုင်ရာနည်းလမ်းတွေကို ပြောပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် … သင့်က ဘယ်လိုအသားအရည်မျိုး ပိုင်ဆိုင်ထားလဲဆိုတာ သိပြီးပြီလား ? သင့်ရဲ့အသားအရည်က အဆီပြန်တဲ့ အသားအရည်အမျိုးအစာလား ၊ ခြောက်သွေ့တဲ့အသားအရည်ပိုင်ရှင်လားဆိုတာ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ အချက်လေးတွေကို သေချာလိုက်လုပ်ပြီး ခွဲခြားလိုက်ရအောင်နော် …
အိမ်တွင်းပုန်းရင်း Netflix ကြည့်ပြီး အပန်းဖြေကြမယ်0457
The KaungHtet March 30, 2020 4:23 pm March 30, 2020
အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း Covid-19 ကြောင့် အပြင်မထွက်ရဘူးဆိုတော့ အိမ်တွင်းအောင်းပြီး ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ့်သူတွေအတွက် စိတ်ကြိုက်ပဲနော် …… အခုလောလောဆယ် ကြည့်ဖို့ အကောင်းဆုံး ဇာတ်လမ်းတွဲတွေနဲ့ ရုပ်ရှင်လေးတွေကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် Kingdom Netflix မှာရှိတဲ့ ကိုရီးယားကားတွေထဲမှာ နာမည်အကြီးဆုံး ဇာတ်လမ်းတွဲ …
Jack Ma Foundation နှင့် Alibaba Foundation မှ ထောက်ပံ့ ပစ္စည်းများ မြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိ0890
Jack Ma Foundation နှင့် Alibaba Foundation မှ ထောက်ပံ့ လှူဒါန်း လိုက်သော ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အထောက်အကူပစ္စည်းများဖြစ်သည့် နှာခေါင်းစည်းများ၊ ရောဂါစမ်းသပ်ရေးကိရိယာများ၊ အကာအကွယ် ဝတ်စုံများ နှင့်အခြားသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့ ပစ္စည်းများကို …
အိမ်တွင် အလုပ်လုပ်ရန် အလိုအပ်ဆုံး ပစ္စည်းများ0448
The KaungHtet March 30, 2020 10:41 am April 1, 2020
အိမ်မှာ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ ဘာတွေလိုအပ်မလဲ… ယနေ့အချိန်မှာတော့ ပြန့်ပွားနေတဲ့ Covid-19 ကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် အလုပ်များကို အိမ်မှနေပြီး လုပ်ဆောင်ကြရပါတယ် … အလုပ်လုပ်ဆောင်ရာတွင် အဆင်ပြေမို့နှင့် အကောင်းမွန်ဆုံး လုပ်ဆောင်နိုင်မို့အတွက်ဆိုရင် အလုပ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းအစုံအလင်နှင့် သက်သောင့်သက်သာဖြစ်စေမယ့် ပစ္စည်းများကို လိုအပ်ပါတယ်နော် …
Jack Ma Foundation and Alibaba Foundation Donation of Medical Supplies Arrive in Myanmar to Fight Covid-190522
The KaungHtet March 30, 2020 9:30 am March 30, 2020
Yangon, Myanmar, March 30, 2020 – Medical supplies donated by the Jack Ma Foundation and the Alibaba Foundation were formally …
စားသောက်ကုန်၊ လူသုံးကုန်၊ အလှကုန်နှင့် ကလေးပစ္စည်းများကို အွန်လိုင်းကနေ တစ်နေရာတည်းဝယ်နိုင်တဲ့ Shop Mart0480
The KaungHtet March 26, 2020 10:35 am March 26, 2020
🛒အခုလို အချိန်ကာလမှာ ဈေးလည်းဝယ်ချင်တယ်၊ လူစုလူဝေးလည်း ရှောင်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ သူတွေအတွက် အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ စျေးဝယ်တာ အဆင်အပြေဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်မှာပါ ။ အထူးသဖြင့် လူတိုင်းက အခြေခံကျတဲ့ပစ္စည်းတွေကို အခုချိန်မှာ ဝယ်ယူနေကြပါတယ် ။ ဒီနေရာ တစ်ခုမေတ္တာရပ်ခံချင်တာကတော့ ပစ္စည်းတွေကို ဝယ်တဲ့အချိန်မှာ …
သင့်ရဲ့မိသားစုလေးနဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါး အချိန်တွေကုန်ဆုံးမို့ဆိုရင် တန်ဖိုးရှိစွာ ကုန်ဆုံးစေမို့က အဓိကပါ …0643
The KaungHtet March 26, 2020 8:34 am March 26, 2020
သင့်ရဲ့မိသားစုလေးနဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါး အချိန်တွေကုန်ဆုံးမို့ဆိုရင် တန်ဖိုးရှိစွာ ကုန်ဆုံးစေမို့က အဓိကပါ … 😍 ပျော်ရွှင်စရာအိမ်လေးမှာ မိဘ ၊ ဘိုးဘွား၊ ဇနီးနှင့် သားသမီးများ၊ မောင်နှမတွေအပြင် ဆွေမျိုးများပါ ရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ အိမ်တွင်းအောင်းရင်း သင့်ရဲ့ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုအချိန်လေးကို …
Covid – 19 ကို ကာကွယ်ဖို့ အထိရောက်ဆုံး နည်းလမ်းများ0247
Covid 19 ကို ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကပ်ရောဂါအနေနဲ့ သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ လူတိုင်းစိုးရိမ်မှုတွေ မြင့်တက်လာပါတယ်။ ဒီရောဂါဟာ သေချာဂရုတစိုက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားမယ်ဆိုရင် ကာကွယ်လို့ရတဲ့ ရောဂါပါ။ ဘယ်လို ကာကွယ်ကြမလဲဆိုတော့ ၁။ အပြင်မထွက်ပါနဲ့! လူစုလူဝေးကို ရှောင်ပါ! အခုအချိန်မှာ …
Social Distancing များပြားလာသည်နှင့်အမျှ အွန်လိုင်း Shopping ကုမ္ပဏီများသည်အွန်လိုင်းဈေးဝယ်ရာ တွင် ပိုမို စိတ်ချလုံခြုံစွာ ဝယ်ယူနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်လာကြ0263
Social Distancing များပြားလာသည်နှင့်အမျှ အွန်လိုင်း Shopping ကုမ္ပဏီများသည်အွန်လိုင်းဈေးဝယ်ရာ တွင် ပိုမို စိတ်ချလုံခြုံစွာ ဝယ်ယူနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်လာကြ လွန်ခဲ့သော ရက်အနည်းငယ်က မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း COVID-19 ဖြစ်ပွားမှုနှင့် ပတ်သတ်၍ သတိထားမှုများတိုးပွားလာခဲ့ပါသည် …. COVID19 …
သင်္ကြန်မတိုင်မှီ ဘာပစ္စည်းတွေဝယ်ထားသင့်လဲ0633
The KaungHtet March 23, 2020 10:48 am March 24, 2020
💦💦 ဟေး.. သင်္ကြန်လည်းရောက်တော့မယ်ဆိုတော့ လိုအပ်တာတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးကြပြီလား …💦💦 သင်္ကြန်အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေကို ကြိုတင်ဝယ်ယူလို့ရအောင် မင်မင်က ဖော်ပြလိုက်တယ်နော် …💁 (၁) စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ 🍜 အိမ်တွင်းအောင်းမယ့်သူတွေအတွက်ဆိုရင် အရသာရှိတဲ့ မုန့်တွေလုပ်စားလို့ရအောင် စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကို …